Tuesday March 24, 2020 - 19:21:37 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ayaa kusii faafaya caalamka isagoo dilaya oo asiibaya kumanaan kun oo qof saacad walba.
tirada Dadka Carona ugu dhintay caalamka ayaa gaartay 16,558 qof, tirakoob ay sameeyeen hay'ado caafimaad ayaa sheegay in dhimashadu ay soo bilaabatay bishii december ee sanaddii 2019 oo hadda laga joogo afar bilood.
Meeshii ugu horraysay ee Carona kasoo bilaawday waa dalka Shiinaha oo kaalinta labaad ugu jira wadamada ugu daran ee uu cudurkani dhibaatada ka geystay, dadka uu asiibay Carona ee lajiifa ayaa tiradooda lagu sjeegayaa 381,494 qof.
dadka dhintay iyo kuwa bukaannada noqday ayaa kasoo kala jeeda illaa 174 dal oo caalamka daafihiisa kala duwan ah, qaaradda uu Carona dhimashada ugu badan ka geystay waa Yurub oo dadka ku dhintay ay gaarayaan 10,114 halka dadka uu asiibay lagu sheegay 185,413 qof.
Qaaradda Aasiya ayaa kaalinta labaad kujirta waxaana dadka Carona udhintay ay gaarayaan 3542 qof halka dadka uu soo ritay lagu sheegay 97,905.
Wadamada Mareykanka iyo canada dadka udhintay cudurkan waa 519 qof halka uu soo ritay 42943 qof.
qaarada afrika dadka udhintay Carona ayaa lagu sheegay 51 qof halka dadka uu asiibay ay gaarayaan 1691 qof.
Marka laga hadlayo dhimashada Carona waxaa ugu horreeya dalka talyaaniga oo ay ku dhinteen dad gaaraya 6100 qof .dadka lajiifo cudurka waxay gaareen 63,927 qof.
kaalinta labaad waxaa kujira shiinaha oo sedax kun iyo boqolaal ah ku dhinteen, sedaxaad waxaa kujira Spain halka Iiraan iyo Faransiiska ay iyana kaalinta afaraad ku jiraan dalalka ugu dhimashada badan Karona balse kaalinta sedaxaad wadamada ugu bukaanada badan waa Mareykanka.